Ngo inqubo yokwelapha yesimanje, kukhona ezivamile collective elithi "dystonia", okuyinto libhekene ukusikwa esingalawuleki imisipha, ngenxa okuyinto kukhona ukuphazamiseka sokugembula yokuma engokwemvelo umzimba, emilenzeni noma izingalo. Isikhathi esining impela, sitholakele dystonia kwemisipha wasibeka izingane, ngakho umbuzo we okushiwo kule anomaly kuyinto ngempela oyingozi.
Ngakho, dystonia kwemisipha ezinsaneni has a lot of izizathu, phakathi lapho ezivamile kubhekwa ngokonakalisa ngobuchopho wengane sokuzalwa umuntu elimele, ngenxa iziyaluyalu kwegazi, ukopha palsy, ukuntuleka komoya-mpilo ngesikhathi sokukhulelwa futhi isifo bokubeletha. Kufanele akufanele ushiywe ngaphandle nokuthi dystonia kwemisipha kungenzeka kubangelwa izifo lezinceku mutating noma ngemva reception okungagunyaziwe eminye imishanguzo. Nokho, ngokuvamile kakhulu kwenzeka ukuthi ngisho nochwepheshe abanolwazi ayikwazi thembeke sithole imbangela, kulesi simo, wafaka le umhlahlo jikelele "idiopathic dystonia imisipha" ziphathwe, ngokuyinhloko igxile nokwehla ekuqaleni ukusabela lingaze.
Ngokuvamile kukhona anomaly enjalo ngoba umzimba wengane osedonsa imisipha isikhathi eside Kufinyeta, elibuye kuholela ukusonteka yomzimba, izandla, ubuso, intamo. dystonia kwemisipha ku ingane iqhubeka isencane kakhulu, futhi izimpawu zaso kuthiwa emva umthwalo olunzulu phezu emgogodleni, isibonelo, ekupheleni kosuku, emva gijima noma izizinda eside. Futhi kufanele kuphawulwe lapha nakuba ezinye njalo uhlobo ukubonakaliswa ngisheshe lesi sifo imayelana nani nokwelashwa kwayo ziningi futhi zaba nzima; futhi, kunalokho, i isiguli esingumuntu omdala has a selithi sifo, okuyinto eyenzeka futhi iphathwa lula kakhulu. Kufanele ungakhohlwa iqiniso lokuthi "Ukuqubuka" lesi sifo ukucasulwa ukucindezeleka kwengqondo, futhi buthule zinyamalale ngesikhathi nokuzola ngokomzwelo.
Yini lubonakaliswa imisipha dystonia? Okokuqala, izingane ezigulayo zibukeke ukuhlukahluka lubonakale kancane, ikakhulukazi, umkhawulo noma umkhawukho wesikhathi umsebenzi wabo ngokomzimba. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi ukugeleza ithoni futhi izifo ezahlukene: hypertonicity - anda imisipha ukungezwani futhi gipotonus - buthaka imisipha ukungezwani. Kubalulekile futhi ukuqonda ukuthi inqubo sokugembula kungathinta indlela elinye iqembu imisipha futhi eziyinkimbinkimbi yabo, okubonisa ukungasebenzi njengoba esitho eyodwa, futhi wonke umzimba, isibonelo.
Namuhla, odokotela ukuhlukanisa phakathi dysphonia spasmodic (ukulahlekelwa izwi kwemisipha), blepharospasm (iso imisipha zokugula), komlobi spasm (kwemisipha izinhlungu zibe isandla) kanye torticollis (entanyeni imisipha kwezinso), futhi ngayinye yalezi zinhlobo has umnikelo yako emibi ekuthuthukiseni bokuphila ingane.
Ukuxilonga dystonia kwemisipha e nezinsana uchwepheshe ezinengqondo kuphela, kodwa futhi abazali isexwayiso kumele wazise Gait ezemvelo ukuma abampofu nemilenze noma lonke umzimba wengane. Lesi sifo futhi libhekene kahle motor manipulations futhi abanye braking motor izinyane, ukubambezeleka ukuthuthukiswa ngokomzimba, uma singakubeka kanjalo. Progressive dystonia kwemisipha immobilizes lesiguli emitholampilo futhi ngokuvamile uholela ekubeni ukukhubazeka yayo ngokwengxenye kamuva ekuphileni, impendulo baqaphe ukuze inkinga kuzosiza ukugwema bagcinelwe esinjalo esidabukisayo. kokutshelwa ngokukhubazeka kwengane, welashwa ngokuphelele massage zokwelapha kanye ekhethekile umzimba zokwelapha, okuyinto manje bakamalalahlengezela Kunconywa kokubili abadala kanye nezingane.
Acute ubovu rhinosinusitis: izimbangela, izimpawu, uphethwe, ukuphathwa
Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu of hemorrhoids
Loluhlelo ukukhiqizwa nokuqhuba ibhizinisi: incazelo, umsebenzi, okuqukethwe
Sochi ezikhangayo. Krasnaya Polyana, indawo, izibuyekezo, izithombe
Elementi kwengqondo kwezinga lobulelesi
Umlingisi Benjamin Smekhov: Biography, Filmography futhi ezithakazelisayo amaqiniso
Indlela yokususa abangani kusukela wengxoxo yangasese "Maynkraft"